Iqembu lezigelekeqe lihlasela odokotela base-Soweto | Scrolla Izindaba
Iqembu lezigelekeqe lihlasela odokotela base-Soweto
Izigelekeqe ezihlomile zisabisa odokotela emitholampilo yabo ezimele e-Soweto.
Odokotela basesimweni sokuvinjezelwa ngemuva kwesehlakalo sokuhlaselwa, ukudubula kanye nokuphanga kuhlonyiwe.
Kusukela ngoNhlolanja, cishe odokotela abangama-30 abasebenza emitholampilo ezimele e-Soweto baye bahlaselwa lapho abasebenzela khona – imvamisa lezi zigelekeqe zenza sengathi ziyiziguli kanti zizohlasela.
Iziguli zabo zadutshulwa futhi zabanjwa inkunzi.
Izigameko ezimbili zokugcina zenzeke ngoNtulikazi lapho kuhlaselwa imitholampilo ezimele futhi yaphangwa ngezinsuku ezihlukile.
Amaphoyisa aqinisekise abakwa-Scrolla.Africa ngokuthi aphenya amacala amaningi okuzama ukubulala nawokuphanga afakwe ngodokotela base-Soweto.
UDkt Linda Chivhuho wase-Meadowlands (ngenhla) uthe badinga ukungenelela kukahulumeni okuphuthumayo futhi okuqinile ukuqeda le nkinga.
Uthe njengoba iziguli zigijimela emitholampilo ezinezimpawu ezinjengomkhuhlane ezingaba eze-Covid-19, abanye odokotela bayasaba ukuvula imitholampilo yabo ezigulini.
“Ozakwethu abasebenza nodokotela balwa ne-Covid-19 ngasikhathi sinye ngokulwa nezigelekeqe ezihlomile.”
Funda ukuthi izigelekeqe zihlasela kanjani, uzwe nodokotela ukuthi bathini KHONA LAPHA